Ịzụta pyridoxal hydrochloride ntụ ntụ (65-22-5) hplc ma98% | AASraw
Pyridoxal hydrochloride ntụ ntụ
/ ngwaahịa / Ndị R & D mmeghachi omume / Pyridoxal hydrochloride ntụ ntụ
Rating: SKU: 65-22-5. Category: Ndị R & D mmeghachi omume
AASraw nwere ikikere na mmepụta ikike site na gram ka usoro nchịkọta nke Pyridoxal hydrochloride powder (65-22-5), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
Pyridoxine HCl ntụ ntụ bụ nnu hydrochloride nke Vitamin B6. Mgbe a na-etinye ya na ahụ, Pyridoxine na-enyere aka n'ịhazi sodium na potassium nakwa ịkwalite mmepụta ọbara ọbara ọbara ọbara. A na-echekwa na ọ bụ ihe mgbochi maka dandruff, eczema, na psoriasis, dị ka Wikipedia.
Pyridoxal hydrochloride video
Pyridoxal hydrochloride isi agwa
aha: Pyridoxal hydrochloride
Usoro Molecular: C8H10ClNO3
Molekụla arọ: 203.62
Melt Point: 159 ka 162 Celsius C
Nchekwa Nche: Ụlọ okpomọkụ
agba: White ma ọ bụ na-acha ọcha Crystalline
Ụzọ nke hydroridloride pyridoxal
COMMON BRAND (S): Pyridoxal hydrochloride
Aha ukwu (S): Pyridoxal HCL
Uzo ojiji nke Pyridoxal hydrochloride
Ọ gwụla ma ị na-a medicationụ ọgwụ na-ewepụ vitamin B6 ma ghara imebi vitamin B ndị ọzọ (dịka penicillamine ma ọ bụ Isoniazid), ị ga-ewere usoro “zuru ezu”. Nke ahụ bụ n'ihi na vitamin B na-arụkọ ọrụ. Lee ụfọdụ ihe atụ:
Ahụ gị nwere ike ịkwụ ụgwọ ihe na-adịghị na pyridoxine.
Regulationkpụrụ nke homocysteine, ihe na-adịghị mma nke metụtara ọrịa obi na Alzheimer, dabere ma ọ dịkarịa ala pyridoxine (B6), niacin (B3), na cobalamine (B12).
Ndị nwere obere B6 nọ n'ihe ize ndụ dị ukwuu nke ọrịa obi, mana ọnụọgụ nke ọrịa obi anaghị agbadata belụsọ ma ha anata B6 na folic acid.
Kedu ihe bụ pyridoxal hydrochloride
Ogologo B6 kachasị mkpa iji zere erughị banyere 1.7 milligrams ụbọchị na olderadults. Ị nwere ike nweta nke ahụ site na atọ atọ nke ọka siri ike na / ma ọ bụ na-acha ọcha achịcha.
Otú ọ dị, iji nweta vitamin B6 dị ukwuu site na nri ndị a na-enweghị ike, ị ga-eri nri:
10 oz (280 grams) nke ọkụkọ nri-ọkụ (esi ya), ma ọ bụ
11 oz (308 grams) nke salmon nri, ma ọ bụ
4 unere, ma ọ bụ
2-1 / 2 riri poteto, na akpụkpọ, ma ọ bụ
1 kilogram nke akwụkwọ nri
Ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị mmadụ na-eri ọtụtụ ọka na edozi nke ọma, vitamin B6 enweghị ụkọ - ọ gwụla ma ị na-eme ihe ziri ezi site na iri ihe niile!
Otú Pyridoxal hydrochloride si arụ ọrụ
Pyridoxine HCl bụ nnu hydrochloride nke Vitamin B6. Mgbe a na-eji ya eme ihe n'ụzọ anụ ahụ, Pyridoxine na-enyere aka n'ịhazi sodium na potassium nakwa ịkwalite mmepụta ọbara ọbara ọbara ọbara. A na-echekwa na ọ bụ ihe ngbochi maka dandruff, eczema, na psoriasis, dị ka Wikipedia. A na-echekwa na enwere ihe nje na nje antioxidant ma tinye ya na akpụkpọ ahụ, ọ bụ ezie na enweghi nyocha iji nyochaa azịza ndị a (CosmeticsCop.com). Ọ bụ ezie na vitamin B6 n'onwe ya anaghị achọzi nlekọta anụ ahụ ma ọ bụrụ na etinyere ya n'elu, ụkọ nwere ike ibute nsogbu akpụkpọ anụ, gụnyere ịkpọtụrụ dermatitis, mgbakasị, eczema, na blisteringtering (iHealthDirectory.com).
Enwere ike ịchọta vitamin B6 na mkpụrụ ọka cereal, agwa, akwụkwọ nri, ngwaahịa kwa ụbọchị, àkwá, azụ, anụ na ntụ ọka, mana Pyridoxine dị na mkpụrụ mkpụrụ ole na ole, gụnyere mkpụrụ osisi dragọn si South East Asia. N'ihe ntecha na ihe nlekọta onwe onye, ​​a na-eji pyridoxine dị ka akpụkpọ anụ na ntutu isi, a na-ahụkwa ya n'ụdị dịgasị iche iche, gụnyere ngwaahịa ịsa ahụ, ncha na ihe ndị na-edozi ahụ, ngwaahịa na-ehicha ọcha, ngwaahịa nlekọta ntutu isi, na nlekọta anụ ahụ.
Uru nke Pyridoxal hydrochloride
Dịka ị nwere ike ịchọpụta n'ebe ọzọ na saịtị a, mgbakwunye B6 nwere ike inye aka na acne / rosacea, autism, nsogbu mpe na ntị na ọrịa mwepụ anya (ADHD), ọrịa ogbu na nkwonkwo na-akpata ọrịa, allergies, ịda mbà n'obi, nnukwu homocysteine, ọrịa obi, ọkwa elu lipid , ịda mbà n'obi, ọrịa ụtụtụ, ịda mbà n'obi metụtara afọ ime, ịda mbà n'obi metụtara iji ọgwụ mgbochi ọnụ, ọrịa premenstrual na ọrịa dysphoric premenstrual, mgbaàmà nke menopause, ndalata ọgụgụ isi metụtara afọ na ncheta ncheta nke na-adịghị akpata Alzheimer's, ahịhịa ahịhịa, egbugbere ọnụ chapped, conjunctivitis, eriri afo na-efe efe, ọbara mgbali elu, njigide mmiri, ọrịa akụrụ na-arịa ọrịa shuga, ụkwara ume ọkụ, ọrịa carpal tunnel, canker sores (aphthous ulcers), ọtụtụ ụdị schizophrenia, vertigo, na oke ibu.
Nkọwapụta hydrochloride Pyridoxal
Kedu pyridoxine hydrochloride? Pyridoxine bụ ụdị vitamin B6 nke osisi, karịsịa na ọka wit, osikapa, na ọka. Pyridoxine hydrochloride, nke a makwaara dị ka pyridoxine HCl, bụ akọrọ, nke na-acha ọcha nke a pụrụ iji mee ka vitamin B bụrụ nke ga-adịru ogologo oge ka ị na-echekwa ha.
Ogoro ka onye obula nwere ike inweta B6 ka o zere onodu ogugu di ka egbugbere anya chapped, nku anya nke oma, na ihi ura, mana obughi onye obula na-enweta vitamin B6 maka mmeri nke oria. Nke a bụ ihe atọ onye ọ bụla chọrọ ịma banyere pyridoxine hydrochloride na-eji na mgbakwunye ịlụso ọrịa ọgụ ma mee ka ahụike gị.
Otu esi azụta Pyridoxal hydrochloride si AASraw
1.To kpọtụrụ anyị site na email anyị usoro nyocha, ma ọ bụ online skype onye na-ahụ maka ndị ahịa (CSR).
Monomethyl auristatin E (MMAE) ntụ ntụ
γ-Aminobutyric acid (GABA: 56-12-2)
Nootropics ntụ ntụ (14)
Ndị R & D mmeghachi omume (39)
Ọrịa cancer (16)
Urolithin ntụ ntụ (2)
Ọla abụba (15)
ndị ọzọ na- (62)
Nke a na-edozi maka ntụpọ ọnwụ
Oral turinabol ntụ ntụ: Ị maara eziokwu banyere steroid ntụ ntụ?
Gịnị Bụ Ọgwụ Kachasị Mkpa Iji Na-agwọ Ọrịa ara?
Kedu ihe iji ọgwụ Nandrolone na-eme ihe na-adịghị mma?
PCT Letrozole raw powder-Ihe ise m ga-ama !!!
Anti-Cancer Drugs Acalabrutinib: Ọgwụgwọ Maka CLL / SLL / MCL
Akụkọ Successga nke Ọma Cabozantinib Na-agwọ Ọrịa Caner
Kedu ozi ị ga-ama tupu i jiri Erlotinib
Nyocha Dacomitinib: Etu esi emeso NSCLC?